Ugu yaraan 48 qof oo ku naf waayay qarax gaari oo ka dhacay caasimada Ciraaq ee Baqdaad - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 48 qof oo ku naf waayay qarax gaari oo ka dhacay caasimada Ciraaq ee Baqdaad
February 16, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ugu yaraan 48 qof oo ku naf waayay qarax gaari oo ka dhacay caasimada Ciraaq ee Baqdaad. [Sawirka: Archive]
Baqdaad-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 48 sideed qof ayaa lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegayaan ilo-wareedyo caafimaad iyo kuwa amaan.
Gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa ku qarxay meel u dhow meel baabuurta lagu gado oo kutaala deegaanka koonfureed ee Bayaa ee gudaha Baqdaad.
Ururka Daacish oo sidoo kale loo yaqaan (ISIS) ayaa sheegatay masuuliyada weerarada maanta oo Khamiis ah.
Baqdaad ayaa aragtay mowjado weeraro ah oo isbiimayn ah oo dhiig badan ku daatay intii lagu guda jirey bilowga sanadkan 2017-ka, kuwaasoo ay masuuliyadooda sheegteen ISIS.
November 4, 2016 Sideed qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay koonfurta-bari ee Turkiga
November 1, 2016 RW Ciraaq Haydar Al-abadi oo kula taliyay ISIS in ay isa-soo-dhiibaan
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Maxamuud Muuse Xirsi sidoo kale loo yaqaan “Cade Muuse” kaasoo asbuucii lasoo dhaafay ku geeriyooday gudaha dalka Isutaga Imaaraatka Carabta, ayaa loo qaban doonaa aas qaran, sida masuuliyiin [...]